Galmudug oo degaanno hor leh kala wareegtay Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug, ayaa sheegtay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Daraawiishta Galmudug oo is garabsanaya ay saakay Kooxda Al-Shabaab ka fara-maroojiyeen degaanno hor leh oo dhaca koofurta Gobolka Mudug.
BACAADWEYN, Soomaaliya - War ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug, ayaa lagu sheegay in saaka Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa Daraawiishta Galmudug, la wareegeen degaanka Qaycad, oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacen dagaallo xooggan.
“Ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug ayaa si buuxda saakay ula wareegay degaanka Qaycad oo maalmihii la soo dhaafay dagaallo xooggan lagula galay kooxda khawaarijta Shabaab”. Ayaa lagu yiri warka soo baxay Galmudug.
Sidoo kale Wasaaradda amnigu, waxa ay xusatay, in Kooxda Al-Shabaab ay jab xooggan kala kulantay ciidamada huwanta ah ee qaranka iyo kuwa Galmudug, isla markaan ay u sii dheertahay duqeyntii labo maalin ka hor Mareykanku ka fuliyay Koofurta Gobolka Mudug.
Dagaalladdan oo biillowday, kadib markii ay kooxda Al-Shabaab, weerar khasaaro badan dhaliyay ku qaadeen degaanka Wisli, ayaa u muuqda mid ka duwan kuwii hore, waxaana la soo warinayaan in qeyb ka mid ah ciidamada huwanta ah uu hoggaaminayo, taliyihii hore ee booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Joon).
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye, (Qoorqoor), ayaa muddo ku sugan magaalada Gaalkacyo, waxaana degaannada dagaalku ka socdo lagu arkay Wasiirka Amniga Axmed Macalin Fiqi, iyo Madaxweyihii hore Genaraal, Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid).
Howlgalkaan, oo la sheegay in uu billow u yahay dadaallo Galmudug looga xoreynayo Al-Shabaab, ayaa la soo warinayaa in laga gaaray guulo degdeg ah, waxaana ciidamadu dhawaan ku dhawaaqeen in ay la wareegeen degaanka Camaara oo 80 kiilo mitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Xarardheere.